मोदी काठमाडौं आएका बेला भारतीय विपक्षी दलका नेता गान्धी किन आउदैछन् काठमाडौं ? — Sanchar Kendra
मोदी काठमाडौं आएका बेला भारतीय विपक्षी दलका नेता गान्धी किन आउदैछन् काठमाडौं ?
नरेन्द्र मोदी काठमाडौंमा भएका बेला भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष तथा मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी शुक्रबार काठमाडौं ओर्लँदैछन् । उनी नेपालमा राजनीतिक भेटका लागि नभई कैलाश मान सरोवरको तिर्थयात्राका क्रममा काठमाडौं झर्न लागेका हुन् ।
बिम्स्टेक सम्मेलनका सकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार फर्किने क्रममा राहुल काठमाडौं हुँदै मान सरोबर जान लागेको भारतीय दैनिक ‘द हिन्दु’ले जनाएको छ ।
अप्रिलमा गुजरातमा भएको सभामा उनले शिवको भक्तिका लागि मान सरोवर जाने घोषणा गरेका थिए । २०१९ को चुनावका लागि कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीको तिव्र स्पर्धा भइरहेको छ । त्यस क्रममा एकले अर्कालाई देखाउनकै लागि भए पनि नेताहरू वचन पुरा गर्ने दौडमा छन् ।
उता, प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौंमा बिम्स्टेक सदस्य मुलुकको प्रगतिका बारेमा बोलीरहेका बेला गान्धीले उनीमाथि राफेल विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मद्दत गरेको भनी आलोचना गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलन गरेरै मोदीको तिव्र आलोचना गरेका उनले वित्तिय मन्त्री अरुण जेट्लीले पनि सो प्रकरणमा जवाफ दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।